जुन बेला काठमाडौंका नदीमा सुन बग्थ्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ९, २०७६ हिमेश
काठमाडौँ — नेपाल संवत् ११४० मंगलबार सुरु हुँदै छ । कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ । यो दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छन् । एकले अर्कालाई सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छन् । म्ह पूजा गर्छन् । र, सम्झिन्छन्, शंखधर साख्वालाई । उनै त हुन्, नेपालको मौलिक संवत्— नेपाल संवत्का प्रवर्तक ।
यो संवत्बारे एउटा गज्जबको किंवदन्ती छ । शंखधरले एक खास साइतमा घरमा ल्याएको सबै बालुवा सुन बन्यो । त्यही सुनको सहयोगले उनले जनताको ऋण तिरिदिए । तिनै जनता ऋणमुक्त भएको खुसियालीमा नयाँ संवत् सुरु भयो । के यस्तो सम्भव हुन्छ ? बालुवा सुनमा परिणत हुन सक्छ ? नेपाल संवत्बारे लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘यो पक्कै पनि वैज्ञानिक सुनिन्न ।’
आखिर त्यतिबेला के भएको थियो ? पहिले, शंखधरबारे ।
उनी व्यापारी थिए । वंशावली र जनविश्वासअनुसार काठमाडौं इलाछेंका बासिन्दा हुन् उनी । इलाछें अहिलेको भीमसेन स्थान हो । त्यहाँ अहिले भीमसेनको मन्दिर छ । त्यतिबेला तिब्बतसँग काठमाडौंको राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध थियो । सुनिन्छ, शंखधरको परिवारले तिब्बतसँग व्यापार गर्थ्यो । केशर पुस्तकालयमा रहेको वंशावलीअनुसार राजा राघवदेवको समयका थिए, शंखधर । उनले नयाँ संवत् स्थापना गरे र यसलाई पशुपतिमा चढाए । राघवदेवको पालादेखि नै शक संवत्को चलन सकिन्छ र नेपाल संवत् सुरु हुन्छ ।
नयाँ संवत्को नाम सुरुमै नेपाल संवत् थिएन । आरम्भताका यसलाई श्री संवत् भनियो । स्थापनाको सय वर्षपछि यसले औपचारिक रूपमा नेपाल संवत्को नाम पायो । नेपालको इतिहासअनुसार लामो समयसम्म चलेको लिच्छवि वंशबारे जानकारी एकाएक हराउँछ र सुरु हुन्छ, २ सय ५० वर्षभन्दा बढीको अन्धकार युग । त्यो समय कसले, कसरी शासन गरेको थियो, त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नै छैन । राघवदेवदेखि मात्र पुन: ऐतिहासिक स्रोत खुल्छ । उनी आफैं लिच्छवि थिएनन् । उनी थिए नुवाकोटबाट आएका वैश्य ठकुरी ।
यसअघि काठमाडौंको राजनीतिक एवं प्रशासनिक केन्द्र हाँडीगाउँ विशालनगर थियो तर एक समयमा आएर त्यहाँको सभ्यता नासियो । यसका कारण धेरै हुन सक्छन्, महामारी अथवा आगलागी । कारण जेसुकै भए पनि त्यसपछि त्यहाँका बासिन्दा स्थानान्तरण भएर अहिलेको कान्तिपुरमा आए । यो त्यही समय हो, जति बेला काठमाडौं उपत्यकामा बौद्ध धर्मअन्तर्गत वज्रयानको प्रभाव सुरु भयो । सुरुमा महायानी बौद्ध धर्मको प्रभाव थियो, पछि त्यसकै हाँगो वज्रयान प्रभावी बन्यो । त्य
ही बेला काठमाडौं उपत्यकामा ठूलाठूला विहार पनि बने । पाटनको हिरण्यवर्ण महाविहारदेखि काठमाडौंको केशचन्द्र महाविहार त्यसै बेला बनेका हुन् ।
सायद शंखधर पनि वज्रयानबाट प्रभावित भए । उनी तिब्बतसँगको व्यापारमा पनि थिए । हुन सक्छ, त्यहाँका धर्मगुरुहरूबाट पनि उनी प्रभावित थिए । उनमा बोधिचित्त उत्पन्न भएको हुनुपर्छ, दानपारमिताले प्रभाव पारेको हुनुपर्छ । यसै क्रममा उनले जनतालाई ऋणमुक्त गर्न आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति दान दिए ।
नेपाल संवत्बारे अध्ययनका क्रममा मल्ल के सुन्दर यस्तो निष्कर्षमा पुगे– शंखधरले घरमा ल्याएको बालुवा सुनमा परिणत भएको होइन । बरु उनी मान्छन्– नदीमा बगेर आउने बालुवामा सुन पनि हुन्छ । शंखधरको घरनजिकै लखुतीर्थ छ । त्यो तीर्थ अहिले डल्लुमा पर्छ । लोकविश्वासअनुसार उनले त्यहीँ सुन पाएका थिए ।
शंखधरले नदीमा आफ्ना कामदार लगाए । बालुवा चालेर सुन निकाल्न लगाए । खोला–नदीको बालुवा चालेर सुन निकाल्ने चलन विश्वमा पहिले पनि थियो । अहिले पनि यथावत् छ । यो कामबाट उनी निकै धनी भए । त्यो सम्पत्ति उनले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरेनन्, लोककल्याणमा खर्चिए । जनताको टाउकामा रहेको ऋण चुक्ता तिरिदिए । अनि सुरु भयो, नेपाल संवत् ।
स्वयम्भू वरिपरि दुई खोला बग्छन् । एउटा हो, भचाखुसी । यो शोभाभगवतीमा पर्छ । उत्तरबाट बग्छ । अर्को दक्षिणबाट बग्छ र पुग्छ, त्यही लखुतीर्थमा । लखुतीर्थको उद्गम नै स्वयम्भू पछाडि हो । सुनको खानी भएको पहाडको छेउछाउबाट बगेका खोला–नदीमा सुन पाइने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । अहिले पो त्यहाँ पानी छैन ।
‘त्यही लखुतीर्थमा शंखधरले बालुवा चालेर सुन निकालेको तर्क भने वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ,’ मल्लले भने, ‘कुनै बेला काठमाडौंका खोला–नदीमा सुन बगेर आउँथ्यो ।’ शंखधर पक्कै ऐतिहासिक व्यक्ति हुन्, जो काठमाडौंका व्यापारी थिए । उनीसँगै कसरी नेपाल संवत् सुरु भयो, यी सबै त्यस पछाडिका तर्क हुन् । प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०७:३१
नेपाल संवत्‌का आर्थिक पक्ष
कार्तिक ८, २०७६ हिमेश
नेपाल संवतको नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, कार्तिक शुक्ल पक्षमा  । नेपाल संवत्का आधारमा लक्ष्मीपूजा नै वर्षको अन्तिम दिन हुन्छ  । त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो दिनको ठूलो महत्त्व छ । तिहारलाई नेपाल भाषामा ‘स्वन्ति’ भनिन्छ र यो तीन दिन मनाउने पर्व हो । यी तीन दिनमध्ये पहिलो दिन लक्ष्मी पूजा नै भयो । दोस्रो दिन ‘म्ह पूजा’ मनाइन्छ भने तेस्रो दिन ‘किजा पूजा’ । वर्षको अन्तिम दिन भएको अर्थमा लक्ष्मी पूजा काठमाडौंका नेवारका लागि सालतमामी गर्ने दिन पनि हो ।
व्यवसायको एक आर्थिक वर्ष यही दिन टुंगिने गर्छ । त्यसको भोलिपल्टबाट नयाँ संवत् सुरु हुन्छ । त्यसको अर्थ हो, अर्को एउटा नयाँ आर्थिक वर्ष । व्यापारीवर्गले लक्ष्मीपूजाका दिन आफ्नो एक वर्षको कारोबार र त्यसको हिसाबकिताब बन्द गर्ने गर्छन् । नयाँ वर्षका दिन नयाँ हिसाबकिताब सुरु हुन्छ । आजभोलि यो चलन धेरै हदसम्म लोप भइसकेको छ । यसका पछाडि आफ्नै कारण पनि छन् । अझै पनि सांकेतिक रूपमा भने लक्ष्मीपूजाको दिन सालतमामी गर्ने चलन छँदै छ ।
धेरै समयअघिदेखि नै काठमाडौंमा एक आर्थिक वर्ष टुंग्याएर नयाँ वर्षमा फेरि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर हेर्न पनि मिल्छ । संस्कृतिविद् सुजनविलास वज्राचार्य भन्छन्, ‘एक निश्चित वर्षलाई आफ्नो व्यापारको समय सीमा मान्ने र त्यसैअनुसार हिसाबकिताब राख्ने हाम्रो विशिष्ट आर्थिक पक्ष हो । यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग पनि उत्तिकै जोडिएको छ ।’ उनी यसलाई हाम्रो पुर्खाले सुरु गरेको गर्विलो पक्ष मान्छन् । राणाकालमा आएर नेपाल संवत्लाई सरकारका तर्फबाट सिधै बेवास्ता सुरु भएको मानिन्छ । यसैक्रममा लक्ष्मीपूजाका दिन सालतमामी गर्नै चलनमा पनि कमी आउन सुरु भयो । तर, नेपाल संवत्कै आधारमा अहिलेसम्म हाम्रा लगभग सबै पर्व रीतिथिति आधारित हुने र मनाइने हुनाले पनि यसको सालतमामीको सांकेतिक स्वरूप कायम रहन सकेको हो ।
पछिल्लो समय नेपाल संवत्लाई नेपालकै मौलिक संवत् मानेर मनाउने र यसको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । केही समय अगाडिसम्म पनि यसलाई नेवारले मनाउने पर्वका रूपमा मात्र हेर्ने संकुचित दृष्टिकोण थियो । अब भने यो खास वर्गको घेरा तोडेर सबै नेपालीको मौलिक संवत् हुने क्रममा छ । तिथिमितिका आधारमा यो संवत् कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदाका दिन सुरु हुन्छ । नेपाल संवत् चन्द्रमासमा आधारित छ ।
संवत् गणना गर्ने दुई आधार छन् । पहिलो, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई गर्ने परिक्रमा गर्ने आधारमा । अर्को भने सूर्यको आधारमा हो । नेपाल संवत् चन्द्रमाको गतिको आधारमा तय हुने गर्छ । यो नेपालको संस्कृति तथा परम्परासँग भिजेको छ । यो नै नेपाल संवत्को सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो । ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म जति पनि विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ, ती तिथिमै आधारित हुन्छन् । नेपाल संवत्को सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पक्ष भनेकै नेपालका मौलिक परम्परा यसमै आधारित हुनु हो । यसकै एउटा पक्षका रूपमा एउटा आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुआत रहेको छ,’ वज्राचार्यले भने ।
शंखधरसँग जोडिएको किंवदन्ती
नेपाल संवत्का प्रवर्तक शंखधर साख्वा हुन् । नेपाल संवत्को सुरुआतबारे दुई खाले किंवदन्ती प्रचलनमा रहेको पाइन्छ, यी दुवै कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक पक्षसँगै जोडिन्छन् । जस्तो, पहिलो विश्वासअनुसार शंखधरले खास साइतमा घरमा ल्याएको सबै बालुवा सुनमा परिणत भएको थियो । पछि त्यसैको मदतले उनले जनतालाई ऋणबाट मुक्त गरे । जनताको ऋण मुक्त गर्ने प्रयास शंखधरको प्रयास आफैंमा अद्वितीय छ । यसैक्रममा नेपाल संवत् सुरु भयो ।
शंखधरबारे अर्को विश्वास पनि छ । त्यसअनुसार शंखधर व्यापारी थिए । उनले त्यसको मदतले राम्रै प्रगति पनि गरे । उनको प्रगति देखेर आफन्त र नजिककाले सहन सकेनन् । शंखधरले गलत काम गर्न थालेको प्रचार गरे । यसैक्रममा उनलाई राजाबाट सजायका भागीदार बनाइयो । तर, उनले केही खराबी गरेका थिएनन् । त्यसैले सम्पत्ति फिर्ता पाए । त्यही सम्पत्ति उनले जनताको ऋण मोचनमा लगाए अनि नेपाल संवत् सुरु भयो ।
लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ । त्यस दिन नेवार समुदायमा ‘म्ह पूजा’ गरिन्छ । म्ह पूजा नेपाल भाषाको शब्दावली हो । यसको अर्थ हुन्छ, शरीर पूजा । संस्कृतिविद् वज्राचार्य भन्छन्, ‘नयाँ वर्षको पहिलो दिन आफ्नै शरीरलाई पूजा गर्ने परम्परा आफैंमा विशिष्ट र मौलिक रहेको मान्न सकिन्छ ।’ यसलाई विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो उत्साह र भावनाले मनाउने गरिन्छ । म्ह पूजाको दिन बिहान सबेरै उठेर नुहाउने चलन छ ।
यस बेला सकेसम्म सुकिलो र नयाँ लुगा लगाउने गरिन्छ । सुरुमा म्ह पूजा गर्ने स्थान निश्चित गरिन्छ । त्यसलाई सफा राखिन्छ । म्ह पूजाका क्रममा प्रयोग हुने सामग्रीहरू पनि सफा गरिन्छ । परिवारमा सदस्यको संख्या जति छ, त्यसैअनुसार पूजाका सामान र त्यसमा प्रयोग हुने अरू सामग्री व्यवस्था गर्नुपर्छ । परिवारको कोही सदस्य बिरामी छ अथवा घर बाहिर विदेशमा छ भने पनि उसको प्रतिनिधित्व गर्दै मण्डल बनाउने गरिन्छ ।
‘यो म्ह पूजाको एउटा विशिष्ट पक्ष हो,’ वज्राचार्यले थपे । सगुनका लागि विशेष खाले पूजा थालीका रूपमा कोतःलाई प्रयोग गरिन्छ । फूलमा सयपत्री, भीमसेनपाती, मखमली र गोदावरी चाहिन्छ । पूजामा सिन्दूर, अक्षता, नैवेद्य, इता (सानो बत्ती), जजंका पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ । सगुनमा हाँसको फुल मात्र प्रयोग हुन्छ । यस्तै सिंगो माछा चाहिन्छ । भोजमा भने यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । सूर्योदय हुनुपूर्व अथवा अस्त हुने पश्चिम दिशातिर फर्केर म्ह पूजा गरिन्छ ।
म्ह पूजा गर्ने परिवारका जति सदस्य छन्, ती सबैको अगाडि जलमण्डल बनाइन्छ । त्यही जलमण्डलको बीचमा पाँच वटा तेलको चक्का बनाइन्छन् । यसलाई चिकंमन्द (तेलमण्डल) भनिन्छ । नजिक बस्नेले त्यसमा पनि पूजा गर्ने गर्छन् । पूजाका क्रममा पुरुषले टोपी लगाउँछन् । महिलाले दायाँ हात बाहिर निकालेर पछ्यौरा ओढ्ने गर्छन् । यो आफ्नो शरीरको तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्ने र वर्षभरि चोट नलाग्ने, बिरामी नहुने, सुख–शान्ति प्राप्त हुने कामना गर्ने अवसर हो ।
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ १२:३८